कमला बनिन् गायिकाबाट मोडल, लोक गीत मात्र हैन पप गीत नि गाउछिन् यती मिठो (भिडियो) – दैनिक नेपाल न्युज
सानै उमेरमा लाइभ दोहोरी गाएर सबैलाई चकित बनाएकी धादिङकी ११ वर्षकी कमला घिमिरेको चर्चा ह्वातै बढेको छ। छिनभरमै दोहोरीको टुक्का फुराउने कमलाको कला देखेर सबै चकित छन्। प्रख्यात गायक गायिकालाई समेत दोहोरीमा टक्कर दिने क्षमता भएकी कमला अहिले सबैको हाईहाई बनेकी छन्। दोहोरी गाउन खप्पिस कमलाको स्वर पनि ज्यादै मिठो र सुरिलो छ।
उनी ९ वर्षको उमेरमै स्कुलका साथीभाई, घरछिमेकमा दोहोरी गाएर चकित पार्ने गर्थिन्। विद्यालयका प्रतियोगीतामा भाग लिई कुनै न कुनै पोजिसन जितेकै हुन्छिन्। गाउँमा हुने चाडपर्व, विवाह लगायतको उत्सवमा उनको गीतमा रमाउनेहरुको ताती लाग्छन्। तर उनकै बुवाले उनलाई मिडियामा बोल्न रोक लगाएको कुरा नले आँफै खोलेकिछिन् । मिडियाको साहारामा चर्चामा आएकी उनको कारीयर उनकै बुवाले कता धकेल्न लाग्दैछन् त? अव उनी गीत गाउँए संगै अरुको गीतमा मोडलिङ पनि गर्न थालेकिछिन्। उनको पहिलो मोडलिङको गीत कस्तो छ त ? हेरौ भिडियो जस्ताको तेस्तै…